သဲကြောင် - ဝီကီပီးဒီးယား
(အင်္ဂလိပ်: Sand cat)
သဲကြောင် (Sand Cat) ၏ ဦးခေါင်းနှင့်ကိုယ်အရှည်မှာ ၁၆လက်မမှ ၂၃လက်မ ဖြစ်ပြီး အမြီးအရှည်မှာ ၁၀ လက်မမှ ၁၄လက်မ ဖြစ်သည်။ အရောင်အသွေးမှာ ညိုဝါရောင် သို့မဟုတ် ခဲညိုရောင် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပေါ်တွင် အမည်းစင်းအနည်းငယ်ရှိပြီး နားရွက်များ၏နောက်ဘက်တွင် အမည်းကွက်တစ်ခုစီ ရှိသည်။ အမြီးဖျားတွင် အမည်းကွင်းသုံးခုရှိပြီး နောက် ဆုံးကွင်းသည် အမြီးဖျားအစွန်းတွင် ရှိသည်။ နားရွက်များမှာ အရွယ်အစားကြီးပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဝေးသဖြင့် ဦး ခေါင်း၏ဘေးဘက်များတွင် ပေါက်နေသကဲ့သို့ ရှိသည်။
သဲကြောင်များကို အာဖရိကတိုက်မြောက်ပိုင်းရှိ သဲကန္တာရများ၊ အာရေးဗီးယား၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသအချို့ နှင့် အာရှအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင် တွေ့ရသည်။ သဲကြောင်များသည် နေ့အခါ ချုံပုတ်များအောက်တွင် သဲကျင်းများတူးပြီး ပုန်းအောင်းနေထိုင်လေ့ရှိသည်။ သဲ ကြောင်များ၏ခြေရာကို တွေ့ရခဲသော်လည်း ခြေရာများတွင် အမွေးရာများခံနေသဖြင့် အခြားကြောင်ခြေရာများ နှင့် အလွယ်တကူ ခွဲခြားသိနိုင်သည်။ ရှဉ့်၊ တောယုန်၊ ဂျာဘိုးကြွက် စသည့် တိရစ္ဆာန်ငယ်များကို ဖမ်းယူစားသောက်သည်။ ဧပြီလတွင် သားပေါက် လေ့ ရှိသည်။ တစ်ကြိမ်လျှင် သားငယ်လေးကောင် ပေါက်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Wozencraft၊ W.C. (2005)။ "Species Felis margarita"။ in Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (3rd ed.)။ Johns Hopkins University Press။ p. 536။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Sliwa, A. (2016). "Felis margarita". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN.
↑ ကျော်ညွှန့်လွင်၏ ကြောင်ရိုင်းများ (စာပေဗိမာန်ထုတ်)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သဲကြောင်&oldid=710333" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။